Dhismaha Dawladda Cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Garabka Isku-tagga Iswiidhen oo doorashadii ku guuleeystay. Foto: Petra Haupt/SR
Dhismaha Dawladda Cusub
La daabacay onsdag 29 september 2010 kl 11.55
Tirakoob laga qaaday qaar ka mid ah bulshada Iswiidhen ayaa lagu ogaaday in badankood ey taabacsan yihiin in madaxa dawladdu Fredrik Reinfeldt sii hayo maamulka dalka inkastuuna aqlabiyad buuxda garabkiisu ku haysan baarlamanka.
War-bixinta tira-koobka ay sameeysay heeyadda Sifo laguna soo daabacay wargeeyska maalinlaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano SVD ayey 53% taabacsan yihiin in xisbiyada ku midoobay garabka midig ee Isku-tagga Iswiidhen awoodda sii hayaan aqlabiyad la’aan iyagoona aan wada shaqeeyn buuxda la sameeyn xisbiyada garabka bidix ee Casaan-cagaarka. Halka ey 31% qabaan in aaney middaasi suurtagal ahayn haddii aan garablayada la isku dhafin.
Fikir hore ayey badankood qabaan taageereyaasha xisbiyada garabka midig, halka mucaaradkuna hadda aqbalay in dawladdu aqlabiyad la’aan maamulka ku sii hogaamiso. Sidoo kale badankood taageereyaasha xisbiga Doogga ayaa qaba in dawladdu ay wada shaqeeyn la sameeyso garabka bidix.
Waxaa halkeeda iyaduna ka socota dhismaha xubnaha dawladda, middaasina oo Reinfeldt looga fadhiyo shanta bisha oktoobar inuu baarlamanka ka jeediyo dhabbada siyaasadeed ee dawladda, iyo xubnaha wasiirro ee golihiisa, islamarkaana baarlamanka dib loo furi doono maalin horteed afarta bisha oktoobar